प्रधानमन्त्रीले भने –‘प्रतिष्ठानहरु खेल मैदान र भर्तीकेन्द्र होइनन्’ – Health Post Nepal
२०७६ साउन ७ गते २१:५६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई खेलमैदान र भर्ती केन्द्र नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तेस्रो सभालाई संवोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेको ओलीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई खेलमैदान बनाउँने होइन, मान्छे नियूक्ती गर्ने भर्ती केन्द्र पनि हैन त्यो ।’ उनले भने, ‘विजिनेश व्यापार गर्ने व्यापारको थलो पनि हैन् त्यो ।’
उनले त्यहाँ कुन पार्टीका पदाधिकारी छन् भन्ने कुराको आफूलाई मतलत भएको भन्दै प्रचार र दबाबबाट आफ्ना निर्णय प्रभावित नहुने बताए ।
‘त्यहाँबाट दबाब सृजना गर्ने ! यस्तो दबाब कमसेकम म स्वीकार्दिन । ’ उनले थपे, ‘सरकारले दबाबमा काम गर्दैन् । निश्पक्ष र तटस्थ ढंगले काम गर्छ ।’
उनले प्रतिष्ठानमा बसेर गल्ती गर्ने छुट कसैलाई नदिने भन्दै कारवाहीको चेतावनी समेत दिए । उपकुलपति वा कुनै पदाधिकारीको गल्तीमा आफूले ‘एस्क्युज’ नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
‘यस्तो छाविन समिति रिपोर्ट कुलपतिले पाएको छैन् । कुलपतिले आफूका रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि सञ्चारमाध्यामाट थाहा पाउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे ‘कस्तो रिपोर्ट यो ? अथवा प्रतिवेदन हो कि राजनीति हो ?’
बजेट पास गर्ने लगायतका एजेण्डामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राप्ती प्रतिष्ठानमा पछिल्ला दिनमा बढेको बिबाद र छनवीनका विषयप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाए । उनले छानवीनको प्रतिवेदन आफूलाई नबुझाईकनै सार्वजनिक गरिएको प्रतिसमेत आपत्ति जनाए । ‘यस्तो छाविन समिति रिपोर्ट कुलपतिले पाएको छैन् । कुलपतिले आफूका रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि सञ्चारमाध्यामाट थाहा पाउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे ‘कस्तो रिपोर्ट यो ? अथवा प्रतिवेदन हो कि राजनीति हो ?’
उनले छानविन टोलीमाथि समेत प्रश्न गर्दै ‘छानवीन गर्न जानु भयो कि राजनीति गर्न जानुभयो ?’ भनि प्रश्न गरे । उनले यो सिनेट सर्वोच्च संस्था भएको र प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गरिरहेको सन्दर्भ उप्काउँदै यस्तो अवस्थामा संस्था चाँही बर्बाद भइरहेको हेर्न नसक्ने सुनाए । ‘सबैभन्दा माथि निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी छौ,’ उनले भने, ‘त्यो ठाउँमा हामी छौ र संस्था उभो लाग्ला भनेको त उधो लागिरहेको छ ।’
उनले प्रतिष्ठान असफल हुँदा आफूलाई पनि अपजश आउँने भन्दै सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले संस्थाको असफलतामा नेतृत्वको असफलता देखिने भन्दै प्रतिष्ठानलाई असफल बनाउँन इच्छा, चाहाना र काम पनि त्यस्तो नगरेको बताए ।
उनले यही अवस्था रहँदा प्रतिष्ठान नै बन्द हुनेसक्ने र चल्न नसक्ने भन्ने दबाब पनि आइरहेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत गरे । ‘हामीले त्यही दफातिर लान खोजेको ? हामीले त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन । ’ ओलीले संस्थालाई जोगाउनुपर्ने भन्दै जोगाउनका लागि फराकिलो मनका साथ दृढतापूर्वक काम पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।